နံပါတ် ၁၀ ပြန်ဖြစ်ပြီ – We love Steempress
We love Steempress
My Steempress Blog
Home/game/lang/myanmar/nextcolony/steem/steempress/နံပါတ် ၁၀ ပြန်ဖြစ်ပြီ
နံပါတ် ၁၀ ပြန်ဖြစ်ပြီ
Posted on October 27, 2019 October 27, 2019 by AgentO
ဒီနေ့တော့ နံပါတ် ၁၀ ပြန်ဖြစ်ပါပြီ။ ထုတ်လုပ်မှု အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ အဆင့် ၁၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုမှာတော့ နံပါတ် ၈ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ delta clan က အင်အား အတောင့်တင်းဆုံးလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Top 10 ထဲမှာ အတော်များများကို ဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂြိုဟ်အရောင်းအဝယ်ကတော့ ကောင်းနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူတွေက ရောင်ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေက ဝယ်နေသလဲ ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ ဒါမှ မဟုတ် အချင်းချင်းပဲ ဂြိုဟ်တွေ ပြန်ပေးနေသလား မသိပါဘူး။ ကစားသမားတွေက ဂြိုဟ်တွေ အများကြီး ပိုင်ဆိုင်နေတာတော့ တွေ့နေရပါတယ်။
Yamato ကလဲ စနေပါပြီ။ လက်ထဲကိုတော့ blue print ရော ယာဉ်ရော ရောက်မလာသေးပါဘူး။ တကယ်လို့ ဘာမှ မရခဲ့ရင်တော့ yamato ရှိနေတဲ့ သူတွေကိုပဲ တိုက်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုလောက်တော့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင်ကလဲ စဉ်းစားနေတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုပေးရ မလဲပေါ့။ ကို @bobokyaw ရေ Yamato ဘလူး ပရင့်ကတော့ ဈေးကြီးပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိသေးပါဘူး။ ဘလူးပရင့် မရရင်တောင် ယာဉ် တစ်စီးတော့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘလူးပရင့်ကတော့ လက်ရှိမှာ Steem နှစ်ထောင် ပေါက်ပါတယ်။ အဲဒီဈေးကတော့ အတော်များပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါက်ခဲ့တဲ့ ဈေး ခေါ်ဈေးပေါ့နော် Steem ၁၈၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်လေးကို ဈေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူများပေးမှာကိုပဲ ထိုင်စောင့်နေရုံ ရှိပါတော့တယ်။
Posted in game, lang, myanmar, nextcolony, steem, steempressTagged neoxian, nextcolony, steemace
My favourite battles today
https://steemmonsters.com?p=battle&id=8f8cc05a6e0920c78a3cc4bd7f751c19938c656a&ref=mmunited This is my first favourite battle. His two monsters (magic) can easily kill my Silvershield paladin. His secondary tank […]
I have reached to Gold I yesterday. Today I have to play with my favourite life splinter. I can still […]
နံပါတ် ၉ ဖြစ်သွားပြီ
ကျွန်တော် သဘောကျမိသော တိုက်ပွဲအချို့
AgentO on FPL week-5 final result